News - Intelligent Flow Peristaltic Pump Outlet ရေရွှဲသည့်ဖြစ်ရပ်နှင့်မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်နည်း
အဆိုပါ Intelligent Flow Peristaltic Pump ထွက်ပေါက်ရေယိုဖြစ်ရပ်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်မည်သို့မည်ပုံ
ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်ကိုလွှဲပြောင်းရန်စီးဆင်းသည့် peristaltic pump ကိုအသုံးပြုသောအခါပိုက်လိုင်းရှိအရည်သည်ချက်ချင်းစီးဆင်းခြင်းကိုရပ်တန့်မသွားကြောင်း၊ ၎င်းသည်များသောအားဖြင့်ဖြည်းဖြည်းချင်းယိုစီးကြောင်းတွေ့ရှိလိမ့်မည်။ ပန့်သည်အလှည့်ကိုရပ်တန့်လိုက်ခြင်းနှင့်အရည်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းထဲတွင်စီးဆင်းခြင်းကိုရပ်တန့်စေသည်မဟုတ်သော်လည်းအရည်သည်ပိုက်ထဲ၌ယိုစီးသွားသောအခါအရည်စီးဆင်းသည်။ ဒီဖြစ်စဉ်၏ဖြစ်ပျက်မှုကိုရေယိုဖြစ်စဉ်ဟုခေါ်သည်။
စီးဆင်းမှု peristaltic စုပ်စက်၏ယိုခြင်းအကြောင်းရင်းများ?
၎င်းသည်ပုံမှန်အရည်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းပြချက်မှာစုပ်စက်သည်အရည်လွှဲပြောင်းသောအခါစုပ်စက်၏ပိုက်သည်အောက်ဖက်သို့ ရောက်ရှိ၍ ဆွဲငင်အားအချို့ရှိသည်။ pump သည်လည်ပတ်မှုရပ်တန့်သွားသောအခါ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စွမ်းအားနှင့်မြေထုဆွဲအားများကြောင့်အရည်ဖြည်းဖြည်းစီးဆင်းသွားမည်ဖြစ်ရာရေပိုက်ထဲရှိအရည်သည်လုံးဝယိုမသွားမချင်းရလဒ်ကိုရေပိုက်၏ပါးစပ်တွင်ယိုစီးသွားလိမ့်မည်။ ဤအချိန်တွင်အရည်အချို့သည်မြေထုဆွဲအားနှင့်အတူယိုစီးနေသောကြောင့်ဆစ်ဖွန်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပွားပါကဘာလုပ်သင့်သနည်းဟုလူအချို့ထင်မြင်ယူဆကြလိမ့်မည်။ တကယ်တော့စိတ်မပူပါနဲ့ လူတိုင်း peristaltic စုပ်စက်၏အလုပ်လုပ်နိယာမနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ကြသည်ဟုယုံကြည်သည်။ pump သည် roller များကိုညှစ်ရန် roller များပေါ်တွင်မှီခိုသည် (၀ င်ပေါက်သည်အနုတ်ဖိအားကိုထုတ်လုပ်သည်။ ထွက်ပေါက်မှအပေါင်ဖိအားကိုထုတ်လုပ်သည်) နှင့် transmission pressure အတွက်ခြားနားချက်ကိုအသုံးပြုသည်။ လည်ပတ်မှုရပ်တန့်သွားသည့်တိုင်ထိုဖြစ်စဉ်ကိုရှောင်ရှားရန် ၀ င်ပေါက်နှင့်ထွက်ပေါက်များပြတ်တောက်စေရန်အတွက်ရေပိုက်ကိုတင်းတင်းညှစ်ထားသည်။
ငါအရည်ရေပိုက်အတွက်ယိုရတဲ့အကြောင်းရင်းများဖော်ပြခဲ့တယ်။ သူတို့ထဲကတစ်ခုမှာရေပိုက်၏ elastic တင်းမာမှုဖြစ်ပါတယ်။ အရည်ယိုရခြင်း၏အကြောင်းအရင်းမှာပိုက်၏တင်းမာမှုသည်အရည်ကိုယ်နှိုက်၏ပျော့ပြောင်းမှုနှင့်ဆွဲငင်အားထက်လျော့နည်းခြင်းဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ဒီအရည် elastic တင်းမာမှုကိုတိုးချဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရည်ကိုအောက်ဘက်ကအင်အားထက်ပိုကြီးအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဖြစ်စဉ်ကိုပြောင်းဖို့လုံလောက်ပါတယ်။
၁။ ပိုက်ပေါက်၏အချင်းကိုလျှော့ချပြီးပြွန်ရှိအရည်သည်သေးငယ်သွားသော်လည်း elasticity မပြောင်းလဲသဖြင့်ပြtheနာကိုဖြေရှင်းသည်။
2. ဖိအားအဆို့ရှင်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ထွက်ပေါက်မှာတလမ်းဖိအားအဆို့ရှင်ထား၏။ ယင်းအပင်ကိုအလုပ်လုပ်သည့်အခါ pump ၏ဖိအားကြောင့်အဆို့ရှင်ကိုဖွင့်ပေးပြီး၊ ရပ်သောအခါအဆို့ရှင်သည်သဘာဝကျကျပိတ်လိမ့်မည်။
မှတ်သားသင့်သည်မှာလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ရပ်၏ပြtheနာဖြစ်သည်။ ပန့်ကိုအရည်လွှဲပြောင်းရန်အသုံးပြုသောအခါ, တွန်းအားဖြစ်ရပ်ဆန်း peristaltic စုပ်စက်ရေပိုက်ထဲမှာအရည်ကိုပြန်စို့ပြန်ပြန်စို့စေပါလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်ရေပိုက်၏အချင်းသည်ပြန်စို့သောစုပ်စက်၏အရှည်ထက်ပိုကြီးသင့်သည်။
အထက်ပါစီးဆင်းမှု peristaltic စုပ်စက်၏ယိုဖြစ်ရပ်၏ဖြစ်ပျက်မှုနှင့်ကာကွယ်တားဆီးရေးအကြောင်းပါ။ အကယ်၍ သင်က၎င်းကိုမှားယွင်းစွာနားမလည်သေးလျှင်သို့မဟုတ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေလျှင်၊ သင်သည်နောက်ကွယ်မှ Lead Fluid အင်ဂျင်နီယာကိုရည်ညွှန်းနိုင်သည်။
post အချိန်: ဇွန်-08-2021